၀ န်ကြီးက Kardemir ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုစစ်ဆေး RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး78 Karabükအဆိုပါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေဂျင်စီက၏ဝန်ကြီးများ, Kardemir ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကြည့်ပါ
06 / 01 / 2019 78 Karabük, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, တူရကီ
inceledixnumx facing အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့် Kardemir ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းဝန်ကြီး Murat အာဏာပိုင်, Karabükသံနှင့်သံမဏိကုမ္ပဏီ (Kardemir) aş.'yရာအရပ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အတူတူKarabükအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Fuat Gurel, အစ္စတန်ဘူလ်လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် Niyazi Sun က Cumhur Unal, ဒုတိယဝန်ကြီးများ, အ AK ပါတီပြည်နယ်ဥက္ကဌအစ္စမေးလ်Altınözü, Karabükမြို့တော်ဝန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟောင်းလက်ထောက်ပါမောက္ခအတွက် ဒေါက်တာ Burhanettin KARDEMİRန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေက Uysal ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းဝန်ကြီး Murat အာဏာပိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Kamil Gulec တည်ရှိသောခံခဲ့ရသည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားနှင့်အတူသွားရောက်ခြင်း, ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mansur လုပျသောသူဖွအခြားမန်နေဂျာ Unal နှင့်ကုမ္ပဏီများကဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်အမ် Furkan တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့သည်။
ထိုအခါအထွေထွေညွှန်ကြားမှု Institution များနှင့်ဝန်ကြီးများကနောက်ဆုံးအစည်းအဝေးခန်းအပါအဝင်ပူးတွဲပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အထူးသဖြင့် Kardemir ၏လှုပ်ရှားမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးစီးခဲ့နှင့်ဖြစ်ပွားနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်. ကျယ်ပြန့်သတင်းအချက်အလက်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာ Kardemir ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Kamil ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ကတိထားရာပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများန်ကြီးဌာန၏ကြီးမားသောအဘို့ပြီးစီးခဲ့နှင့်ဒေသတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအားလုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများများ၏ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုထဲကဖေဖော်ဝါရီလ 2019 မှာပြီးစီးခဲ့လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ ကြောင်း ဒီ Kardemir2၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်အားဘီလီယံကို $ 's အကျိုးစီးပွားသဘောပေါက်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့် 550 တထောင်တန်ချိန် 2.500.000 တန်ချိန် Kamil Gulec, 2019 ပစ်မှတ်ထား 3,5 တန်ချိန်သန်းကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်နှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အနေဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်း, အလွန်ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုရှာတွေ့အထိပါပဲ။ အဓိကနိုင်ငံများတွင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စည်းကမ်းနှင့်တည်ငြိမ်ရေးမှတဆင့် Kardemir အထူးသဖြင့် 2002 နှစ်ပေါင်းထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Kamil Gulec ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုပ်ဆောင်ထောက်ပြ, "ကျနော်တို့ရဲ့အစိုးရ2$ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့လျှင်ထိုအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ရှေ့မှမဆောင်ခဲ့ခဲ့သည်ကြှနျုပျတို့အတှကျအိပ်မက်ပါလိမ့်မယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါအာဏာပိုင်များထံမှဝန်ကြီးများ, Filyos ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Kamil Gulec ၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ထောက်ခံမှုတောင်းခံ Kardemir ဟုသူကပြောသည် Filyos များ၏ဆိပ်ကမ်းပြီးစီးနှင့်အတူတင်သွင်းခြင်းနှင့်ပို့ကုန်များယှဉ်ပြိုင်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
Kardemir ရဲ့အကြောင်းကို 150 သန်း $ Voice ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး Murat အာဏာပိုင်၏အဓိကပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစေသည်သူဖေဖော်ဝါရီလအကုန်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူKarabükအတွက်လေထုအရည်အသွေးကိုအများကြီးပိုကောင်းတဲ့အဆင့်အထိရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှဝန်ကြီး Kardemir စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဒေသတွင်းယင်း၏အရေးပါမှုမှ Kardemir ရဲ့ပုံဆွဲအာရုံစိုက်မှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည် Says ကို လုပ်. , "လူအပေါင်းတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများအတွက် Kardemir ဝန်ကြီးဌာနထောက်ခံမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကြင်နာပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအသင်းများနှင့်အတူဝန်ကြီးဌာနကျွမ်းကျင်သူများက Kardemir ရဲ့အတူတူလာမယ့်မှအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Kardemir ဥက္ကဌ Kamil Gulec ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ရှင်းလင်းပြီးနောက် လုပ်. မြို့ပြစီမံကိန်းဝန်ကြီး Murat ခရီးစဉ်အာဏာပိုင်ထံသို့တင်ပြခဲ့ပါသည် Kardemir ထုတ်ကုန်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စားပွဲတစ်ခုပါဝင်သည်ဟုထားကြ၏။
ထို့နောက်ဝန်ကြီးအာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့်ပူးတွဲပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှကုမ္ပဏီ၏ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြည့်ဖို့ခမောက်ဝတ်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ Sinter စက်ရုံ Desulphurization စနစ်, 1.200.000 mxnumx / ဇ Sinter Cooler ဧရိယာဖုန်ငွေကောက်ခံစနစ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်3mxnumx / ဇ Sintered ထုံးကျောက်နှိပ်စက် & ပြဖုန်ငွေကောက်ခံစနစ်၏ Sinter စက်ရုံခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည် တွေ့ရှိရစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ။ ဝန်ကြီးများအာဏာပိုင်လောလောဆယျသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကျော်ကိုယ်တော်တိုင်ရှာနေ "ဒီမှာအတွက်စာနယ်ဇင်းတစ်ဦးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်တော်အရင်ကဒီဧရိယာမှာတွေ့ရှိသောဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏ဘယ်မှာအများဆုံးအရပျ။ သင်လက်ရှိရဝုဏ်နှင့်နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုအခွအေနေမှပြုတ်ကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အချိုးအစား၏ကဒီမှာလုပ်ပြီးနောက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်စက်ရုံအကြောင်းကို 200.000 သန်း $ တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆောက်အဦအားလုံးကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပိုရှည် Kardemir ပတ်ဝန်းကျင်, သဘောသဘာဝ, အထိခိုက်မခံ, ထုတ်လုပ်, ခရိုင်နှင့်လုပ်အားနှင့်ချွေးကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့စက်ရုံတစ်ရုံအဖြစ်တိုင်းပြည်အားဝတျပွုပါမညျကိုက်တဲ့အခါမှာဖေဖော်ဝါရီလသကဲ့သို့ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဝန်ကြီး Turhan, Trabzon အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကြည့်ပါခဲ့သည်
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Apaydin3။ တိုင်းဒေသကြီးများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ကြကွညျ့ရှု
ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 111 317 သည့်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သုံးပါခဲ့သည်